Ndingayifumana njani imali yokuthengisa i-SEO?
Kukho imeko eqhelekileyo kwii-arhente zedijithali ezininzi ezijoliswe kumancinci xa umthengi ebuza ngoko iinkonzo ze-SEO, kwaye bavuma ukuncedisa, bengenalo ulwazi olwaneleyo kule ndawo kunye nabasebenzi beengcali. Siyakwazi ukuqonda isigqibo sabo njengoko abafuni ukulahlekelwa ngumthengi. Ngeenyanga eziliqela bazama ukufumana i-traffic kwiwebhusayithi kunye nokuphucula iindawo zazo. Nangona kunjalo, abakwazi ukufumana umphumo omuhle njengoko banako ubuchule obuncinane kule ndawo. Ukuba awufuni ukuchitha ixesha lokufunda i-SEO, kukho indlela yokuphuma. Unokufumana i-SEO intengiso yomthengisi - logiciels de paie.
Ngokuqhelekileyo, umthengisi we-SEO ngumntu okanye i-arhente enika uluhlu olubanzi lweenkonzo ze-SEO ngamanani afikelelekayo. Umthengisi we-injini yokukhangela i-intanethi uya kukunceda ukuba uphumelele umkhankaso wobuchule bokuxhobisa abaxumi bakho. Umthengisi we-SEO unokunika ixesha elide ongayinikela kwiinkalo zakho eziphambili kwaye unikezele iziphumo ezilungileyo kubathengi bakho.
Kulo nqaku, uya kufumana ulwazi oluncedo lokufumana umthengisi othe tye kunye nendlela onokuzuza ngayo kwiinkonzo zakhe.
Kutheni kufuneka usebenzise inkqubo ye-SEO reseller?
Okokuqala, i-SEO intengiso ye-SEO inokukunika ngezakhono zokuthengisa ezinamandla. Njengoko umsebenzi wakho awukuthengisi iinkonzo zokwenza umsebenzi, kodwa ukuthengisa iimbono zokwenza izinto, kufuneka ukwazi ukuphendula imibuzo yabathengi ngeenkqubo zabo zokucwangcisa iwebhusayithi kunye neendlela ze-SEO oziphumezayo ukuze ufumane umphumo omuhle. Yilungele ukubonelela ngabaxhamli bakho ngeengxelo ze-SEO zenyanga kunye nolwazi lwezobuchwepheshe.
Ukuba inkqubo yakho yokuthengisela i-SEO iquka iinkonzo ze-SEO kuphela ezimhlophe.Kule meko, abathengi bakho abayi kukwazi ukuba uye waphuma ngaphandle kwezinye iinkalo. Kuthetha ukuba amava abathengi abachaphazelekayo kunye nenkampani yakho iya kubonisa emva kwakho, kungekhona kwiprogram yakho ye-SEO reseller. Yingakho kufuneka uqaphele xa ukhetha i-SEO reseller. Ulwazi lweMveliso
Kufuneka uqaphele iimbono ze-SEO kunye nezicwangciso ezibekayo emva kwemveliso yakho yokuthengisela ngaphandle. Kuya kukunceda uzwise ukukholisa kunye nobuchule. Ngaphezu koko, kuya kukunceda ukuba ukhokele abaxhasi bakho malunga nezicwangciso abazidingayo ukuze baqhube ishishini labo. Ukuqinisekisa ukuba uyakwazi ngokwaneleyo malunga nezicwangciso ze-SEO, kufuneka ukhethe inkqubo ye-SEO reseller ekunika uqeqesho oluqhelekileyo kwaye ungashiyi yakho.
I-SEO yindoda enendleko
Okwangoku, iinkonzo ze-SEO zinexabiso zindleko ezininzi. Umcebisi ophakathi we-SEO e-USA ufumana i-$ 150 ngeyure kunye nokuxhomekeka kwinqanaba lobuchule bakhe. Ngoko ukuba unquma ukuphuma kwi-SEO yakho, kufuneka ulungele ukuhlawula ngaphezu kwe-$ 100 ngeyure ukufumana iziphumo ezilungileyo. Unokufumana inzuzo kwi-SEO, njengoko kuya kukunceda ukuba ugcine imali kwiimivuzo zengcali kwaye ukhange abathengi abachaphazelekayo.